ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း – အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ
21Nov 20127Sep 2018
တစ်ခါတုံးက မုဆိုးတစ်ယောက်ဟာ တနေကုန် အမဲလိုက်ပေမယ့် သားကောင် တစ်ကောင်မှ မတွေ့ဘူး။ နေဝင် ချိန်နီးလာပြီဆိုတော့ ဘာကောင်ဘဲတွေ့တွေ့ အမိအရ ပစ်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ခဲထားတယ်ဆိုဘဲ…. နောက်ဆုံး နေဝင်ခါနီး မှာ ခြင်္သေ့ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ ပက်ပင်းတိုးတယ်။ ကိုက် ၂၀ အကွာလောက် မှာရှိတဲ့ ခြင်္သေ့ကြီးကို ချက်ခြင်း သေနတ်နဲ့ အသေအချာ ချိန်ပြီးပစ်လိုက်တယ်….ဒိုင်း ဆိုတဲ့ သေနတ်သံအစား ခလုပ်က ချောက် ကနဲ အသံထွက်လာသည်။ ခြင်္သေ့ သည် တဖြည်းဖြည်း ချဉ်းကပ်လာသည်။ ကြောက်စိတ်ကြောင့် ဇောချွေးများပြန်လာသည်။ ဆောက်တည်ရာမရဘဲ တုန်လှုပ် ချောက်ခြားလာသည်. မုဆိုးဘဝမှ သားကောင်း ဘဝရောက်သွားမှန်း ချက်ချင်း သတိရလာသည်။ ဘာဆက်လုပ်ရမှာလည်း ဦးဏှောက်ကို အစွမ်းကုန် ဖျစ်နှစ်ပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေကို ထုတ်ကြည့်သည်။ ဦးဏှောက်ကထုတ်ပေးလိုက်သော အကောင်းဆုံး အဖြေကတော့ နောက်တစ်ချက် ပြန်ပစ်ကြည့်ရန် ဖြစ်သည်။ သည်တစ်ခေါက် ကျည်ဆံ ထွက်ကောင်းထွက်လာနိုင်သည်တဲ့။ နောက်တစ်ချက် ပြန်ပစ် ကြည့်သည်။ ပို၍ ချောက်ခြားလာသည်။ ဒိုင်း အစား ချောက် အသံသာထွက်လာသည်။ ကဲ..မထူးတော့ဘူး သေနတ် အားကိုးလို့ မရတော့ဘူး ဆိုရင်လည်း ပြေး ရန်သာ ရှိတော့သည် ပေါ့။ သေနတ်ကို ပစ်ချ ပြီး ရှိသမျှ အားနှင့် ထွက်ပြေးသည်။ ခြင်္သေ့ ကြီးလည်း နောက်မှထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်လာသည်။ နောက်ဆုံး အသူရာနက်သောချောက်ကမ်းပါးထိပ် တစ်ခု ကိုရောက်သည်။
အောက်သို့ ခုန်ချမည် ဆိုလျှင်လည်း အရိုးနှင့် အသား တခြားစီဖြစ်ပြီး သေမှာ သေချာသည်။ နောက်မှာလည်း ခြင်္သေ့ကြီး က ထပ်ကြပ်မကွာ.. နောက်ဆုံး သတိရလိုက်ဒါကတော့ ဆုတောင်းရန်သာ… အမြန်ဆုံးဒူးထောက်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်သည်။ ဘုရားရှင်ထံ တောင်းမိတောင်းရာ ဆုတောင်းလိုက်သည် ..“ဘုရားသခင် ဤ ခြင်္သေ့ကြီး ဟာ စိတ်ထားမွန်မြတ်ပြီး သနားကြင်နာတတ်တဲ့ ခရစ်ယာန် ဖြစ်စေပါ ” တဲ့… ခဏတာ ငြိမ်သက်သွားတော့ အသာလေး မျက်စိ ဖွင့် ပြီးမရဲတရဲ ကြည့်လိုက်တယ်… ခြင်္သေ့ကြီးလဲ ကျကျနန ဒူးထောက် ပြီးဆုတောင်း နေတယ် ဆိုဘဲ…သူတောင်းတဲ့ ဆုကတော့ “ဘုရားသခင်.. ကျွန်တော်မျိုး အတွက် လုံလောက်သော အစားအစာ ကို ချပေးသနားတော်မူတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ။ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ တတွေဟာ ဘုရားသခင်ထံ နည်းမျိုးစုံ နဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချီးမွမ်းခြင်းဟာ အခြားသောသူတွေ အတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြုံစရာ အကြောင်းဖြစ် မဖြစ်၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်တဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ဖြစ် မဖြစ်ဆိုဒါ အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။
Thanksgiving ဆိုတယ့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း ကာလ ရောက်လို့ လာပြန်ပါပြီ။ သမိုင်းကြောင်း ကို ပြန်လေ့လာကြည့်မယ် ဆိုရင် အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ မထမဦးဆုံးသော Thanksgiving ကို ၁၆၂၁ ခုနှစ် Playmouth အရပ်ဒေသမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဘုရားသခင် ပေးတဲ့ ကောက် ပဲသီးနှံ များကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အနေနဲ့ ဒေသခံ Wampanoag အင်းဒီးယန်း များကိုဖိတ်ပြီး ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ဝတ်ကို ပြုတယ်။
၁၈၀၀ လွန် နှစ်ရောက်လာတဲ့ အခါ အမေရိကန် ရဲ့ ပြည်နယ်တော်တော်များများ မှာ Thanksgiving ရက်ကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ဖို့ လှုပ်ရှား နိုးဆော်လာကြတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ အချိန် ၁၈၆၃ ခုနှစ်မှာ Abraham Lincoln က သဘောထား ကွဲလွဲ နေတဲ့ မြောက်ပိုင်း နဲ့ တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များကို တစ်ပေါင်း တစ်စည်း ဖြစ်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Thanksgiving Declaration ကြေငြာချက်ကို နိုဝင်ဘာရဲ့ တတိယအပတ် ကြာသပတေးနေ့ မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
ကျမ်းစာထဲမှာ လည်း Thanksgiving ကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်တယ်။ တရားဟောရာကျမ်း ၁၆း၉-၁၂ မှာ
“ ၉ စပါးကို ရိတ်စကာလနောက်၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ခုနှစ်သိတင်းလွန်မှ၊ ၁ဝ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ ကိုယ်တိုင်မှစ၍ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား ကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်အတိုင်း၊ အလိုလို ပြုသော ပူဇော်သက္ကာကို ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ၁၁ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် နာမတော်တည်စေဘို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသော အရပ်တွင်၊ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဘို့ ခုနှစ်သိတင်းပွဲကို ခံ၍ သားသမီး၊ ကျွန်ယောကျ်ား မိန်းမ၊ သင့်နေရာ၌ တည်းခိုသော လေဝိသား၊ ဧည့်သည် အာဂန္တု၊ မိဘမရှိသောသူ၊ မုတ်ဆိုးမတို့သည် ရွှင်လန်းခြင်းကိုပြုရကြမည်။ ၁၂ သင်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ကျွန်ခံခဲ့ဘူးကြောင်းကို အောက်မေ့၍၊ ဤပညတ်တရားတို့ကို ကျင့်စောင့်ရမည်။” လို့ဖော်ပြထားဒါကို တွေ့ရပါတယ်။
ကောက်ပဲသီးနှံ များကို လုံလုံလောက်လောက် ပေးတဲ့ အတွက် ယုဒ လူမျိုးများ အဖို့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဤ ကျမ်းပိုဒ်တွင် တွေ့ရှိရတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘုရားသခင်က ယုဒလူတို့ အား “သင်တို့သည် ကျိုးစားပြီး စိုက်ပျိုး၊ အားထုတ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့စကားကိုလည်း နာခံလိုက်လျှောက်ခဲ့ ပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ယခု ကောင်းကြီးများစွာ ချပေးပြီးပြီ။ အခုအချိန်မှာတော့ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း ပွဲ ကို ခံယူဖို့ အချိန်ဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။
ဘုရားသခင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ပွဲခံယူရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ ပထမ ဆုံးအချက် ကတော့ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း (Worship) ဖြစ်တယ်။ အပိုဒ် ငယ် ၁၁ ကို အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွင် ကြည့်လျှင် “This isatime to celebrate before the LORD your God at the designated place of worship he will choose for his name to be honored.” လို့ဖော်ပြထားတယ်။ သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ရမယ် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ ဂျူး လူမျိုးများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော နေရာ ဆိုဒါ သန့်ရှင်းသောတဲတော် ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုခေတ် ယုံကြည်သူ ကျွန်တော်ကျွန်မ တို့အတွက် သတ်မှတ်ထားသော နေရာသည် ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်၊ ဝတ်ပြုရာ ချီးမွမ်းခြင်းကို ပြုလုပ်ရာ နေရာ သို့မဟုတ် အသင်းတော် ကိုဆိုလိုသည်။ အခြားသော နေရာများတွင် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း Thanksgiving ဝတ်ကို မပြုလုပ်ရ ဟုတားမြစ်ခြင်း ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဘုရားရှင် ကို ဝတ်ပြု၊ ကိုးကွယ်၊ ချီးမွမ်းခြင်းကို ပြုလုပ်ရာ နေရာ ကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာ (designated place of worship) အဖြစ် ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ Thanksgiving ပြုလုပ် မည့်အခါတွင် ဘုရားသခင် နှစ်သက်သော ပထမအချက်သည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း (Worship) ဖြစ်သည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း မပါသော Thanksgiving ပွဲသည် အနှစ်သာရ ပြည့်ဝသော Thanksgiving ဟု မခေါ်ဆိုနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်သည် ဝမ်းမြောက်သည် ဆိုပြီး ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမပါဘဲ လက်လွက်စပယ် ပျော်ပါး၊ သောက်စားမူးယစ် ခြင်းပုံစံခြင်း ပြုလုပ်သော Thanksgiving ပြုလုပ်ခြင်းကို ဘုရားရှင် မနှစ်သက်ပါ။
ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ
ဒုတိယအချက် အနေနှင့် Thanksgiving ပြုလုပ်ရာတွင် အရေးကြီးသော အချက်တစ်ခုမှာ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ များနှင့် အတူတကွ ကျင်းပပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Thanksgiving ပြုလုပ်ခြင်းသည် မိသားစု၊ ဆွေမျိုးမိတ်င်္သဂဟ များနှင့် အတူ ပျော်ရွှင်စွာ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းရာနေ့ဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁ တွင် “သားသမီး၊ ကျွန်ယောကျ်ား မိန်းမ၊ သင့်နေရာ၌ တည်းခိုသော လေဝိသား၊ ဧည့်သည် အာဂန္တု၊ မိဘမရှိသောသူ၊ မုတ်ဆိုးမတို့သည် ရွှင်လန်းခြင်းကိုပြုရကြမည်။” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ မိမိတို့ ၏ အိမ်သူအိမ်သား များအပြင် ဧည့်သည် အာဂန္တု၊ မိဘမရှိသောသူ၊ မုတ်ဆိုးမတို့သည် ရွှင်လန်းခြင်းကိုပြုရကြမည် ဟု ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ မိမိ တစ်ယောက်တည်း ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း Thanksgiving မပြုလုပ်ရ ဟု မဆိုလိုသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းသော၊ မင်္ဂလာရှိသော Thanksgiving ပြုလုပ်သည့် အချိန်တွင် ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း၊ အသင်းသူ အသင်းသား များနှင့် အတူတကွ ဆင်နွဲရန် လိုလားသည် ဟု နားလည်ရပါသည်။
နိဒါန်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သလို ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း ဝတ်ကို ကျွန်တော်တို့သည် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ မိမိ အတွက် ဝမ်းမြောက်စရာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာ အကြောင်းသည် အခြား သူ အတွက် ဝမ်းနည်း စရာ၊ စိတ်ထိခိုက်စရာ လည်းဖြစ်တတ်သည်။ လောကတွင် အောင်မြင်ခြင်း များစွာ ကို ရရှိခံစားရခြင်းကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းThanksgiving ပြုလုပ်သူ ရှိသလို၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ အနိုင်ရခြင်း စသည့် အကြောင်းများကြောင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း Thanksgiving ပြုလုပ်သူများလည်း ဒုနှင့်ဒေး ရှိပါသည်။ သို့သော် စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန် တစ်ယောက်အတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း Thanksgiving ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ပေးသော ကယ်တင်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း ဝမ်းမြောက်ခြင်း ဆုကျေးဇူးတို့ ကြောင့် ဘုရားရှင် အားကျေးဇူးတင်သည့် အနေဖြင့် ပြုလုပ်သော ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း Thanksgiving ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သင့်သည် ဟု ထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏ ဘဝတွင် ခံစားရသော ကျန်းမာခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခြင်း နှင့် အောင်မြင်ခြင်း များစွာ တို့ကို ချပေးသနားတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ များစွာအတွက်သာ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကယ်တင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကို ခံစားရသော ကြောင့် ပြုလုပ်သော Thanksgiving ပွဲလည်း ဖြစ်သင့်ပါသည်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေအပေါင်း ဘုရားသခင်ပေးသော ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်း ကျေးဇူးတော် များကို ရရှိခံစားရသောကြောင့် ဘုရားသခင် အားကျေးဇူးတင်ပါသည် ဟု ခံစား ဝေငှနိုင်သူ များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ ဟု ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သရင်း . . .
Tags: မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ, Thawngno
Previous Go Home And Tell It (Pr. Awi Khawmhuai Tunngo)
Next Testimony and Praising God from U Kam
Pingback: ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း « Calvary Burmese Church